Rasaasa News – Lix ka Mida Mareeglayaashii iyo Wariyeyyaashii Zone 9 oo Maxkamad la Soo Taagay
on May 8, 2014 3:40 pm
Addis Abab, May 8, 2014 – Mareeglayaasha iyo wariyeyaasha zone 9, ayaa shalay ka soo muuqday maxkamd, iyaga oo lagu eedeeyey dambi culus, oo la xidhiidha arggagaxisno, ka dib kolkii ay dawlada Atoobiya la kulantay cadaadis xoog leh oo kaga yimid aduun waynaha.
Garyaqaan u hadlay Mareeglayaasha oo magaciisa la yidhaahdo Amaha Mekonen, ayaas sheegay in ayna jirin cid la xukumay, laakiin laga qaaday mamnuucidii saarayd. Wuxuu sheegay in maxkamada la keenay lix ka mid ah saddex kalena Booliska ayaa wali maraan maraya.
Lixda Maxbuus ayaa maxkamada mar labaad la keeni doonaa May 17, 2014, sida uu sheegay garyaqaan Amaha Mekonen.
Saddexda dhiman ayaa la sheegay in maanta oo Khamiis ah, iyagan maxkamada la keenayo.
Dhalinyaradan oo la xidhay April 25, 26 2014, ayey Boolisku ku eedeeyeen in ay galeen dambiyo culus, walina waxaa baadhid lagu hayaa
Kumpuyuutaradooda oo ay Boolisku haystaan.
Ururka wariyeyaasha caalamiga ee magiciisa loo soo gaabiyo [Committee to Protect Journalists (CPJ)], ayaa cambaarayn dusha kaga tuuray dawlada Atoobiya isaga oo ku eedeyey in ay cabudhiso saxaafada iyo xoriyada hadalka. Waxa Atoobiya ka baxsaday dhawrkii sano ee ugu dambeeyey 49 wariye, kuwaas oo ka cararay shirqoolo loo maleegay in lagu xidho.
Hayada xuquuqda adduunka ee Amnest, ayaa eedan midaa la mid ah dusha ka saartay dawlada Atoobiya, iyaga oo ugu baaqay in ay siidaayaan dadka u xidhan fikirkooda oo ay qoraal ku muujiyeen.
Xoghayaha arimaha dibada ee MAraykanka John Kerry, ayaa ka codsaday raysal wasaaraha Atoobiya in uu ilaaliyo xoriyada qawlka iyo in uu ruuxu sheegi karo waxay la tahay ama sida uu wax u arko, taas oo la,aanteed ayna horumar iyo dimoqraatiyad midna iman karin.
Madaxa xuquuda dadka ee Qaramada midoobay Navi Pillay, ayaa cambaareeyey talaabada cabudhiska ah ee ay ku talaabsatay dawlada Atoobiya, isaga oo ugu baaqay in xoriyadooda loo soo celiyo mareeglayaasha iyo wariyeyaasha.
Dawlada Atoobiya, oo dhago adayg lagu yaqiin ayaa waxaad moodaa in ay ka jawaabtay culayska ay aduunyadu saartay xiligan.